Saliida hoos u dhacdey kadib "kacitaan sare oo ay gaadhey halkii ugu sareysay taariikhda abed" – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Saliida hoos u dhacdey kadib “kacitaan sare oo ay gaadhey halkii ugu...
Saliida hoos u dhacdey kadib “kacitaan sare oo ay gaadhey halkii ugu sareysay taariikhda abed”
Sicirka saliida ayaa hoos u dhacay Talaadadii, in kasta oo suuqa uu weli ka walaacsan yahay halista jawaabta millatari ee laba weerar oo lagu qaaday laba xarun shidaal oo Sucuudigu leeyahay, ka dib markii uu horseeday kor u kaca ugu weyn ee sicirka sannado.
Weerarki sabtidii ayaa kor u qaaday rajadii suuq shidaalka, kaas oo bilihii u dambeeyay diiradda saarayay walaaca baahida iyada oo ay ugu wacan tahay hoos u dhaca koritaanka adduunka iyada oo loo marayo muranka ganacsi ee Maraykanka iyo Shiinaha.
Markay ahayd 06:30 GMT, Brent cudeedka wuxuu hoos ugu dhacay 30 senti, ama 0.4 boqolkiiba, $ 68.72 foosto, halka US WTI hoos u dhacday 57 senti, ama 0.9 boqolkiiba, $ 62.33 foosto. Horaantii, labada bartilmaameed waxay hoos u dhaceen qiyaastii 2 boqolkiiba midkiiba.
Isniinta, qiimaha saliida ayaa sare u kacay 20 boqolkiiba inta lagu gudajiray fadhiga, oo ah boodkii ugu weynaa ku dhawaad ​​30 sano, ka hor inta uusan xirmin ku dhawaad ​​15 boqolkiiba afarta bilood ee sare.
Maamulka Macluumaadka Tamarta ee Mareykanka ayaa ku sheegay warbixintiisa billaha ah ee howlaha qodista Isniintii in soo saarista saliida Mareykanka la filayo inay ka kaco todobo dhisme oo dhagxaan ah 74 kun oo foosto maalintii maalin kasta bisha Oktoobar, una gaareyso heer gaaraya 8.843 milyan fuusto maalintii.
Japan waxay sheegtay maanta inay tixgelin siin doonto isku-dubbaridid ​​isku dhafan oo ah kaydka saliidda, haddii loo baahdo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii sheegay in Iran ay u muuqatay inay ka dambeysay weeraradii lagu qaaday xarumaha saliida Sacuudiga, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay inuusan dooneynin dagaal.
Previous articleBoris Johnson oo lagu tilmaamay inuu Qarwayo
Next articleOil falls slightly after “historic rise”